Zimbabwean opposition official TendaI Biti leaves the magistrates courts after been granted bail in Harare, Thursday, Aug, 9, 2018. Biti was charged with inciting public violence and declaring unofficial results as fears grow about a government crackdown following the disputed July 30 election, raising concerns about a wave of repression against the opposition by the government of Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa.
Zimbabwean opposition official Tendai Biti arrives at the magistrates courts in Harare, Thursday Aug. 9, 2018. Biti was deported to Zimbabwe following his arrest in Zambia after his asylum bid was rejected. Biti's plight has raised concerns about a wave of repression against the opposition by the government of Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa.
The U.N. refugee agency said it was "gravely concerned" about the reports of Biti's forced return to Zimbabwe, calling such actions a serious violation of international law. The U.S. State Department said the U.S. had "convoked" the ambassadors of Zimbabwe and Zambia "to register our gravest concerns" and would review its cooperation with Zambia's government.
The state-run Herald newspaper in an "editorial comment" said Biti "sneaked into Zambia in a bid to evade the law." Under Mugabe's 37 years in power, Zimbabwe was dogged by charges of rigged and fraudulent elections, along with violence against opposition figures.